मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? जानी राखौ…! « Sajha Page
प्रकाशित मिति: February 27, 2018
काठमाडौं,पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब -(अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु वा बच्चा बन्छ।
यौनको विषय मानिसको सर्वाधिक चासोको विषय भएतापनि समाजको यसको खुल्ला चर्चा वर्जित भएकाले आफ्नै यौनांगका बारेमा धेरै कुराहरु मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ । महिला गुप्तांग अर्थात् योनी निकै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । सम्भोगको सन्तुष्टि देखि, गर्भाधान र सन्तान पैदा गराउने मार्गको रुपमा रहेको यो अंगका विषयमा केही अनौठा तथ्यहरु भने थाहा नहुनसक्छ । योनी बारेका १० रोचक तथ्य यस्ता छन्-
१. योनीको औषत आकार ३-४ इन्च हुन्छ, तर सम्भोगको चरमोत्कर्षका बेला यसको आकार २ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि हुनसक्छ ।
६. योनीमा प्राकृतिक लुब्रिकेन्ट स्क्वालिन हुन्छ । यो लुब्रिकेन्ट सार्क माछामा पनि पाइन्छ ।,
सम्भोग अघि महिलाको योनिका बारेमा जान्नै पर्ने यी कुराहरु(भिडियो सहित)
– योनिलाई अंग्रेजीमा भेजाइना भनिन्छ । ल्याटिन भाषामा यसको अर्थ तरबार बोक्नेवाला (तरबार बोक्ने व्यक्ति) भन्ने हुन्छ ।
– महिलाको योनिको औषत आकार ३ देखि ४ इन्च हुन्छ । तर सम्भोगको चरमोत्कर्षका बेला यसको आकार २ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि
– गुप्तांगको रौँको औषत आयु भनेको जम्मा ३ हप्ता हो । जबकी टाउकोको रौँको आयु अधिकतम ७ वर्षसम्म हुन्छ ।
– योनिको उत्तेजक भाग अर्थात् भंगाकुरमा ८ हजार वटा स्नायु हुन्छन् । जबकि पुरुषको लिंगमा केवल चार हजार वटा मात्र हुन्छन ।
– योनिमा कैयन् प्रकारका ब्याक्टेरिया पाइन्छन् । योनिमा पाइने केही ब्याक्टेरियाहरु दहीमा समेत पाइन्छन् ।
– योनिमा आफ्नो सफाइ आफै गर्ने प्रणाली हुन्छ ।
– एक घण्टाको समय भित्रमा एक जना महिलाले अधिकतम १ सय ३४ पटकसम्म चरम सन्तुष्टि पाएको रेकर्ड छ । तर पुरुषको हकमा भने एक घण्टाको अवधिमा बढीमा सोह्र पटकसम्म मात्र चरम सन्तुष्टि प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ ।
– योनिमा प्राकृतिक चिल्लो पदार्थ हुन्छ । यो चिल्लो पदार्थ सार्क माछामा पनि पाइन्छ ।
– गुप्तांगको भित्री भित्ता अन्य अवस्थामा मुज्जा परेर रहेको हुन्छ र सम्भोगको बेला उक्त भित्ता छाता जस्तै गरि फुक्दछ ।
– योनिको गन्धलाई महिलाको भोजनको परिकार सेवनले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले सहवासको अघि लसुनको सेवन नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
साहरुखकी एक्लि पुत्री सुहानाले लगाउने एउटा टि-शर्टको मुल्य कति? सुन्दा होस् उड्छ ! (फोटो सहित)
गुडिरहेको कारमा सेक्स गरिरहेका थिए,त्यसपछि जे भयो…
एजेन्सी । गुडिरहेको कारमा सेक्स गर्दा भारतको पीलिभीतमा एक युवकले ज्यान गुमाएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार पीलीभीतबाट पूरनपुरतर्फ गइरहेको कार मिनी ट्रकसँग ठोक्किदा चालक युवकको मृत्यु भएको हो । यो दुर्घटनाको कारण सेक्स रहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
कारमा युवक र युवती थिए र गुडिरहेको कारमा सेक्स गरिरहेका थिए । जसको कारण कार मिनी ट्रकसँग ठोक्कियो । घटनापछि जब प्रहरी दुबैलाई कारबाट बाहिर निकाल्यो तब उनी नग्न अवस्थामा थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा युवक आफ्नी २४ वर्षीय प्रेमिकासँग पुरनपुर गइरहेका थिए ।